Recounts – Page2– အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
၁၆ နှစ် မောင်၊ ယောင်တောင်တောင်
အတွက်အချက်အတိုင်းသာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ၁၆ နှစ်မှာ ဆယ်တန်း အောင်ရမှာပါ။ သို့ပေမင့် ဘဝဆိုတာ ဖြစ်ချင်ပေမယ့်လည်း မဖြစ်၊ မဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်ချင်သလိုတွေ စွတ်ဖြစ်ကုန်တတ်တာမျိုးမို့ ၁၆ နှစ်မှာ ကျွန်တော် ဆယ်တန်း မအောင်ခဲ့ပါဘူး။ ဆယ်တန်းကို ရောက်ပင် ရောက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အဲဒီ့နှစ်က မအောင်ဘူးခင်ဗျ။
မအောင်လို့ ကျသလားဆိုတော့လည်း မကျဘူး။ အတော်တော့ အူလည်လည်နိုင်ပါတယ်။ စာမေးပွဲ မအောင်ဘူးဆိုတာဟာ ကျတာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ကျတယ် ဆိုတာ အောက်ကို ရောက်သွားတာ မဟုတ်လား။ အဲတော့ ဆယ်တန်းကျတယ်ဆိုရင် ဆယ်တန်းရဲ့ အောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုးတန်းတို့၊ ရှစ်တန်းတို့ဆီ “ကျဆင်း”သွားတာမှ မဟုတ်တာ။ မအောင်တာဟာ ကျတာ ဘယ်ဟုတ်ပါတော့မလဲနော်။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့ အတော့်ကို အူလည်လည်နိုင်တဲ့ မအောင်နည်း တစ်မျိုး ရှိပါသေးတယ်။ အောင်တော့ အောင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မအောင်ဘူးဆိုတဲ့ နည်းပေါ့။ ဆယ်တန်းအောင်ရင် တက္ကသိုလ် တက်လို့ ရတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော် အောင်တဲ့နည်းက တက္ကသိုလ်တက်လို့ မရတဲ့နည်းနဲ့ အောင်တဲ့ အောင်နည်းပါ ခင်ဗျ။ “ခ”စာရင်းက အောင်တာတဲ့။
ဘာကြီးမှန်းလဲ မသိဘူး။ တက္ကသိုလ်မှ တက်လို့ မရတော့ တက်ချင်ရင် နောက်တစ်နှစ် ပြန်နေရတာပဗျာ။
ဖြစ်ပုံက အဲဒီ့ ၁၉၇၃-၇၄ ပညာသင်နှစ်က ထူးခြားသဗျ။ စာမေးပွဲ မေးခွန်းက ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိဘူး၊ မတရား လွယ်သွားပြီး အောင်တဲ့သူတွေ ဗုံးပေါလအော ဖြစ်ကုန်တာနဲ့ တစ်ဘာသာ အမှတ် ၄၀၊ စုစုပေါင်း ၆ ဘာသာ အမှတ်ပေါင်း ၂၄၀ ရရင် အောင်ရမယ့်ဟာကို သတ်မှတ်ချက် ပြင်ထည့်လိုက်ကြပြီးသကာလ အဲဒီ့နှစ်မှာ တစ်ဘာသာကြိတ်နှုန်း ၆၀၊ စုစုပေါင်း အမှတ် ၃၆၀ ရမှ အအောင်ပေးတဲ့ နှစ်ကြီး ဖြစ်သွားပါရောလား။ အဲတော့ ကျွန်တော့် ခမျာလေးမှာ တစ်ဘာသာမှ ၄၀ အောက် မရောက်ရှာဘဲ စုစုပေါင်း အမှတ် ၃၆၀ ကို မမီတဲ့အတွက် “က”အဆင့်ကို မမီတော့ဘဲ “ခ”အဆင့်မှာ ဟတ်ကော့ (half-cocked)ကြီး ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
(ဟတ်ကော့ဆိုတဲ့ သိုးဆောင်းစကားက သေနတ်မောင်းက ကျည်ဆံရဲ့ ဖင်ကို အပြည့်မရိုက်မိဘဲ တစ်ဝက်ပဲ ရိုက်မိသွားတာမို့ ကျည်မထွက်ဘဲ တို့လို့ တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေတာကို ဆိုလိုသတဲ့။)
အမှန်တော့ စာလည်း မညံ့လှတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဝေလေလေအဖွဲ့သား အတော်များများ အဲဒီ့နှစ်က အဲသလို ဟတ်ကော့ကြီးနဲ့သာ အောင်ခဲ့ကြပြီး ဆယ်တန်းကို နောက်တစ်နှစ် ထပ်နေခဲ့ကြရပါတယ်။
ခုတော့လည်း ပါးစပ်ရာဇဝင်လေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့လေ။ အဲတုန်းကတော့ တော်တော်ကြီးကို အရေးကြီးခဲ့တာပ။ ကျွန်တော့်မိဘတွေကတော့ သိပ် ဆူလား ပူလား မလုပ်ကြပါဘူး။ နောက်တစ်နှစ် သေချာ ပြန်ကြိုးစားဖို့လောက်ပဲ ပြောခဲ့ရှာကြပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ မဆူပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာ အနေရတော့ အနည်းအပါး ခက်နေခဲ့တာပေါ့လေ။ ဒါလည်း အောင်စာရင်း ထွက်ပြီးခါစလောက်သာပါ။ နောက်ကျတော့လည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
နှစ်နည်းနည်း ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ ဆယ်တန်းကို တစ်နှစ်နဲ့ အောင်ခဲ့သလား၊ နှစ်နှစ်ဖြေယူရသလား၊ သုံးနှစ်ဖြေခဲ့ရတာမျိုးလားက သိပ် အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ ဆယ်တန်းအောင်၊ မအောင်ကသာ အရေးကြီးချင် သလို ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီ့ကမှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ အဲဒါတွေက ဘာမှ အရေးမကြီးတော့သလိုပဲ။ ဆယ်တန်း အောင်ခြင်း၊ မအောင်ခြင်း၊ ဘွဲ့ရခြင်း၊ မရခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု၊ လူတောတိုးမှုမှာ ဘာမှ သိပ်အရေးမပါတော့ဘူး။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ အဲလို ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ အဲဒီ့အတိုင်းကြီးကို အတိအကျ ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။
လောလောဆယ်မှာ နိုင်ငံခြားက ပညာရှင်တွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီး ဆက်ဆံနေရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အသိပညာတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘွဲ့တွေ၊ သူတို့ရဲ့ ဖတ်အား မှတ်အားတွေကို သဘောကျမိတယ်၊ အားကျမိတယ်။ စာဖတ်တဲ့ နေရာမှာတော့ သူတို့ကို ကျွန်တော် ယှဉ်နိုင်နေတယ်။ အသိပညာ အရာမှာလည်း သိပ်တော့ အကွာကြီး မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် ဘွဲ့အရာမှာတော့ ကျွန်တော့်အနေအထားက သူတို့ကို ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်တဲ့ အနေအထား။ အလားတူပဲ အဲဒီ့ဘွဲ့ကို အခြေခံပြီး ရရှိထားတဲ့ ရာထူးဂုဏ်သိရ်၊ ရပ်တည်မှုတွေအရလည်း သူတို့က သာနေကြတယ်။ ရနေတဲ့ ဝင်ငွေချင်းတော့ သိပ်ကွာလှမယ် မထင်ဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာက ပညာကို တန်ဖိုး ထားတာတော့ သေချာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ပညာက ပွဲလယ် သိပ်မတင့်ချင်သလိုကြီးပဲ။ ပိုက်ဆံက တယ်စကားပြောနေတာကိုး။ အဲတော့ ပိုက်ဆံရှိရင် လူရာဝင် လူတောတိုးနေတော့တာပေါ့။
ထားပါလေ… အဲဒီ့ကနေ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ သေခါနီးကျရင်တော့ ပညာလည်း အရေးမကြီး၊ ရာထူးဂုဏ်သိရ်လည်း အရေးမပါ၊ ပိုက်ဆံလည်း ကယ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်နေတုန်းသာ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ ပွဲလယ် တင့်ချင်ခဲ့ကြ၊ တင့်အောင် နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ကြရင်း သေခါနီးကျမှ အမောဖောက်ပြီး ငါ့နှယ်၊ ဟိုဟာလေးမှ မလုပ်ခဲ့ရ၊ သည်ဟာလေးမှ မပြုခဲ့ရနဲ့ နှောင်းနောင်တများ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ ဂိုက်မကျ ဖြစ်သွားရသူတွေလည်း သည်လောကထဲမှာ နည်းမယ် မထင်ပါဘူး။
ရှင်နေတုန်းနဲ့ ဖြတ်သန်းဆဲ အခိုက်အတံ့မှာ အရေးကြီးသလို ထင်ယောင် မှားခဲ့သမျှဟာ ကာလတောင်တာ ရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘာဆိုဘာမှ မှုလောက်စရာ မကောင်းတော့တာကိုက လောကတံထွာ ဓမ္မတာလို့သာ ဆိုရ မယ် ထင်ပါရဲ့။
၁၆ နှစ်အရွယ်တုန်းက ကျွန်တော် ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့သလဲ။
သေချာတာကတော့ဗျာ၊ အဲတုန်းက ကျွန်တော် ဓာတ်ရှင်မင်းသား၊ အဆိုကျော်၊ စာရေးဆရာ၊ ဓာတ်ရှင်ဒါရိုက်တာ သိပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့သပေါ့။ အများ သိတော်မူတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော့်အတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ်က မင်းသားကြီး ဝင်းဦးပါ။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာ ကံကောင်းတာက အထင်ကြီး လေးစား အားကျ အတုယူစရာ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိနေတာပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဝင်းဦးပေါ့။
ဝင်းဦးကို အားကျမိတဲ့အတွက် ဓာတ်ရှင်နယ်မှာ ကျွန်တော် ဘာကောင်မှ ဖြစ်မလာခဲ့ပေမယ့် အမြတ်ထွက်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲက အဓိက အကျဆုံး အမြတ်ကတော့ ကျွန်တော် အထင်ကြီး လေးစား အားကျတဲ့ သူ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည်ကို တုပ ကြိုးစားခဲ့မိလို့ ကနေ့အခါမှာ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီ့ အင်္ဂလိပ်စာလေး သေစာရှင်စာတတ်မှုတစ်ခု အကြောင်းပြုပြီး ပိုက်ဆံ ကောင်းကောင်း ရှာစားနိုင်နေတာပါပဲ။ အဲဒါဟာ ကျွန်တော့်ဖခင်ကြီးရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်စေချင်လွန်းမှု ကျေးဇူးနဲ့အတူ သွားလေသူ နိုင်ငံကျော် မင်းသားကြီး (ဦး)ဝင်းဦး ကျေးဇူးကလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါနေပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ အမြတ်ကတော့ လက်နှိပ်စက်နဲ့ စာရေးတာပါ။ သူစာရေးရင် လက်နှိပ်စက်နဲ့ စာရေးတယ်လို့ သိထားရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်သည်လည်း စာပေနယ်ကို တိုးဝင်စမှာကတည်းက လက်နှိပ်စက်နဲ့သာ စာရေးပါတော့တယ်။ အဲဒီ့အတွက် လက်နှိပ်စက်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မျက်နှာလွှဲစနစ်နဲ့ သွက်သွက်ကြီး ရိုက်နိုင်လာခဲ့သလို ကွန်ပျူတာခေတ် ရောက်တော့လည်း စာရိုက်ရတာ ဘာအခက်အခဲမှ မရှိတော့ပါဘူး။
အဲဒီ့ အမြတ်ကတော့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းအတွက်တောင် မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်မိသားစုလုံးအတွက်ပါ ထွက်တဲ့ အမြတ်လို့ တောင် ဆိုနိုင်တယ်။
တကယ်က ကျွန်တော့် ဖခင်ကြီးက လက်နှိပ်စက်စာရေးအဖြစ် အမှုထမ်းပြီး ကျွန်တော့်ကို လူလားမြောက်အောင် ပျိုးထောင်ခဲ့သူပါ။ သို့သော် သူက အောက်ကျလှတဲ့ သူ့အလုပ်ကို ကျွန်တော် မဆက်ခံစေချင်ရှာပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လက်နှိပ်စက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့်ကို သင်ကြားပြသခြင်း မရှိသလို အားလည်း မပေးပါဘူး။ ကျွန်တော် လက်နှိပ်စက် သင်ချိန်မှာ သူသာ ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်မှာကိုတောင် တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော် လက်နှိပ်စက်သင်တာက အသက် အစိတ်လောက်ကျမှပါ။ အဖေ မရှိတော့ချိန်ပေါ့။ အမေကတော့ မကန့်ကွက်ခဲ့ရှာပါဘူး။ မကန့်ကွက်ဆို မေမေက ကျွန်တော် ဘာလုပ်နေနေ ကြည်ဖြူတတ်သူမို့ပါပဲ။ အဟဲ… မိန်းမ ယူတာက လွဲရင်ပေါ့ ခင်ဗျာ။
အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျ၊ ကလေးသားမြေးရချိန်မှာ ကွန်ပျူတာက ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ဘဝထဲကို တိုးဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ သည်အခါ ကျွန်တော့်အိမ်သူကိုလည်း လက်နှိပ်စက် သင်ခိုင်းခဲ့သလို ကျွန်တော့်သားသမီး လေးတွေလည်း စာတတ်ချိန်ကတည်းက လက်နှိပ်စက် လက်ကွက်တွေကို မျက်နှာလွဲ ရိုက်တတ်အောင် ကိုယ်တိုင် သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။ သည်တော့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဝင် လေးဦးစလုံးဟာ ကွန်ပျူတာ လက်ကွက်ကို မျက်နှာလွှဲစနစ်နဲ့ ဂျောင်းဂျောင်းပြေး ရိုက်နိုင်နေကြပါတော့တယ်။ ဝင်းဦးရဲ့ အကျိုးပေးပုံကတော့ နောက်ထပ် မျိုးဆက်အထိတောင် ပါသွားတယ်လို့ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဝင်းဦးကို အထင်ကြီး လေးစား အားကျ အတုခိုးခဲ့တဲ့အတွက် ထွက်လာတဲ့ အမြတ်တွေထဲမှာ နောက်ဆုံး တစ်ခုကတော့ စာရေးရာမှာ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ရွှင်ရွှင်သောသောလေး ရေးတတ်တာကလည်း သူ့ရေးဟန်ကို အတုခိုးရာက ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။
ကျွန်တော့်အသက် ၁၆ နှစ်ဆိုတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ တောင် ကြာခဲ့ပါပြီ။
နှစ် ၄၀ ဆိုတာ မနည်းမနောကြီးပါပဲ။ အခုနေရာကနေ ပြန်ပြောင်း ငဲ့စောင်းကြည့်တာတောင် အတော်လေး ကွာလှမ်းသွားပါပြီ။ မနေ့တစ်နေ့ကလိုပဲလို့ ပြောလို့ မရတော့ပါဘူး။
သည်နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ခရီးတွေ၊ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ရယ်ခဲ့ရတာတွေ၊ မောခဲ့ရတာတွေကို တစ်စစီ တစ်ဆစ်စီ ပြန်ကြည့်ဖို့တောင် ခပ်ခက်ခက်ပါပဲ။
ကျွန်တော့်ဘဝက ကျွန်တော်ရေးတဲ့ စာတွေလိုပဲ၊ လိုရင်းကို ဘယ်တော့ ရောက်မယ်မှန်း မသိတတ်နိုင်ဘဲ တောရောက် တောင်ရောက် လျှောက်ဖြစ်နေခဲ့တော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ အခုထက်ထိလည်း လူသာ ဆက်လုပ်နေရတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာကောင်မှန်းကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် မသိသလိုကြီးပဲ။
ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်မလာခဲ့တာတော့ သေချာပါတယ်။ ၁၆ နှစ်တုန်းက ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေကို ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ နှစ်လေးဆယ်အကြာမှာ အဲဒီ့ ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်တဲ့အထဲက စာရေးဆရာဆိုတာလေး ကတ်ကတ်သတ်သတ် ကျန်နေသေးတဲ့အတွက် မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တာတွေ အကုန် ဖြစ်မလာဘူးလို့သာ ပြောရတာပါ။ တကယ်က အဲလို ဖြစ်မလာတဲ့ အတွက် သိပ်တော့ ထိထိခိုက်ခိုက် မခံစားရပါဘူး။
တကယ်ချရေးကြစတမ်းဆို ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ ခရီးကို သည်လိုစာတိုလေး တစ်ပုဒ်တစ်လေမျှနဲ့ ဘယ်လိုမှ အာသာပြေနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့် တောရောက်တောင်ရောက် လျှောက်ရေးတတ်ပုံမျိုးနဲ့ဆို စာအုပ်အထူကြီး တစ်အုပ်စာ ရေးပြနိုင်ပါမှ တန်ကာကျပါမယ်။
၁၆ နှစ် မတိုင်ခင်
အတိုတွေ ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ၁၆ နှစ်အထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် သံခိပ်ကို သည်လို ရလာပါတယ်။
မွေးတယ်ဗျာ။ မန်းရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ။ မွေးရုံသာ မွေးလိုက်ရတယ်။ အခါလယ်သားပြည့်ဖို့ ဝေးစွ၊ လူ့လောကထဲ ရောက်လို့မှ ရက်ပေါင်း ၅၀ မပြည့်တတ်နိုင်သေးခင်မှာ ကယားပြည်နယ်က လောပိတရဲ့ ဟိုးဘက် လောဓလေ့ဆိုတဲ့ ရွာကလေးကို ရောက်သွားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေဆဲ ဒိုင်းနမိုက်ခွဲသံ တအုံး အုံးကြားမှာ လူကလေး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
အဲဒီ့ကနေ လူမှန်း မသိတသိကျတော့ မန်းရွှေမြို့တော်ကြီးက အမေ့ရဲ့ ခန်ဗှင့်(န်)(ထ်) (ကွန်ဗင့်) ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ကျောင်းနေဘဝ စတယ်။
အဲဒီ့ကနေ လွိုင်ကော် စိန့်ဂျိုးဇက်ကျောင်းကို ရောက်တယ်။ နောက်တော့ သာသနာပြုကျောင်းတွေကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းတာက ဆက်တိုက်။ လောဓလေ့ အလယ်တန်းကျောင်းမှာ သုံးတန်းအထိ နေရတယ်။ လေးတန်းကျတော့ တောင်ကြီးက အမှတ် ၃ အမျိုးသမီးအစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား နေရတယ်။ တရုတ်-ဗမာ အရေးအခင်းဆိုတာကြီးကို စကြုံရတယ်။ ဘာမှန်းလည်း မသိဘူး။ လူကမှ ကိုးနှစ်သာသာ ရှိသေးတဲ့ အရွယ်။ ပုန်း၊ ပုန်းဆိုတာနဲ့ ကျောင်း မြေတိုက်ခန်းထဲ ဝင်ပုန်းနေခဲ့ရတာပဲ မှတ်မိတယ်။
ထူးခြားချက်က အဲဒီ့ လေးတန်းကျောင်းသားဘဝမှာ ဇတွေ ပြလာခဲ့တာပါပဲ။ ကျောင်းပြဇာတ်မှာ ဇာတ်လိုက် ဝင်လုပ်တယ်။ ကဗျာရွတ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရတယ်။ ကျောင်းနံရံကပ်စာစောင်မှာ ကဗျာဝင်ရေးတယ်။ ကျောင်းသူကြီးတွေ က နေ့လယ်ခဏနားချိန်မှာ ခေါ်ခေါ်ပြီး သီချင်းဆိုခိုင်းရင် လူပုံအလယ်မှာ မရှက်မကြောက် သီချင်းတကြော်ကြော် ဆိုတတ်တယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က ဆူးတွေလည်း စတင်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
ငါးတန်းနှစ်ရောက်တော့ မန္တလေးက အမှတ် ၉ အစိုးရ အထက်တန်း ကျောင်းမှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား နေရပြန်တယ်။ အတတ်ပေါင်း စုံလာခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားကြီးတွေ ကြီးစိုးရာမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် မသိသင့်တာတွေ သိလာခဲ့၊ မတတ်သင့်တာတွေ တတ်လာခဲ့တယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တတ်ခြင်းရဲ အစက အဲဒီ့ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားဘဝမှာ ဖြစ်နေတယ်။ ညဘက် ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကို ကျော်ပြီး ညဈေးတန်းလည်း သွားတတ်လာတယ်။
ဒါ့ကြောင့် နှစ်တစ်ဝက်နဲ့ ဘော်ဒါက အထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ အဲဒါက ဘဝမှာ အမှတ်တရပေါ့။ ကျွန်တော် ဆိုး၏ပေါ့။
ကောင်းတာကတော့ ကျောင်းဘင်ခရာဝိုင်းမှာ ပုလွေ ဝင်မှုတ်ရင်း ဒို၊ ရေ၊ မီ၊ ဖှာနဲ့ ရင်းနှီးလာခဲ့တာပါပဲ။ ပုလွေဟာ ကျွန်တော့်ငယ်ဘဝရဲ့ တစ်ခုတည်းသော တူရိယာ။ စန္ဒယား သိပ်တီးတတ်ချင်တယ်၊ အခွင့်အရေး မရှိဘူး။ အကော်ဒီယံ သိပ်တီးတတ်ချင်တယ်၊ အိမ်က ဝယ်မပေးနိုင်ဘူး။ အကော်ဒီယံ ဝေးစွ၊ ဘာဂျာလေးတစ်လက်တောင် အိမ်က ဝယ်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝ။
ခြောက်တန်းနှစ်မှာ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ မိသားစုလိုက် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့တယ်။ အထက ၆ ဗိုလ်တထောင်ဆိုတဲ့ စိန်ပေါ(လ်) ကျောင်းဟောင်းကြီးမှာ ဗိုလ်ကြီးဗဟိန်းဆိုတဲ့ တပ်က ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကို ကျောင်းအုပ်ကြီး လုပ်နေချိန် ရောက်သွားတာဆိုတော့ တစ်ကျောင်းလုံး ဆရာမြင်ရင် အလေးပြုတဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီး ကိုယ်ထဲမှာ စွဲသွားခဲ့ရတယ်။
အဲဒီ့ ၆ တန်းကတည်းက နေလာလိုက်တာ ၁၆ နှစ်မှာ ဆယ်တန်းကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
တောကျောင်းတုန်းက ဇ ပြခွင့် ရခဲ့ပေမယ့် မြို့ကျောင်းကျတော့ ဇပြခွင့် သိပ်မရဘူး။ ဒါတောင် နွေရာသီ လုပ်အားပေး၊ ဘာ၊ ညာမှာ ကျွန်တော်က သီချင်းတွေ ဘာတွေ ရေးလိုက်သေးတယ်။ ဆိုလိုက်သေးတယ်။ ပုလွေကလည်း မှုတ်လို့ ကောင်းဆဲ။ အိမ်အောက်ထပ်က တရုတ်တစ်ယောက်ဆီကနေ ဂစ်တာတီး သင်လို့ ဂစ်တာလေးလည်း အနည်းအပါး တဗျန်းဗျန်းခေါက် တတ်လာခဲ့ပြီ။ သို့သော် အိမ်က ဂစ်တာ ဝယ်မပေးသေး။
စာတွေကတော့ ငါးတန်းကတည်းက စရေးနေပါပြီ။ ရေးလိုက်ရတဲ့ ကဗျာ၊ ရေးလိုက်ရတဲ့ ဝတ္ထု။ မနားတမ်းကို ရေးနေတာပါ။ ဘယ်မှတော့လည်း မပို့ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ရေးနေခဲ့တာပါ။
အဲဒါ ၁၆ နှစ်သားအထိ ကျွန်တော့်ဘဝ သံခိပ်။
အဲဒီ့ကနေ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကို သံခိပ်ရပြန်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့…
နောက်တစ်နှစ်မှာ ဆယ်တန်းအောင်၊ တက္ကသိုလ်ရောက်လို့ ပြောရမှာပေမယ့် ကြားထဲမှာ အဖြစ်အပျက်တွေက ရှိသေးတယ်။ ဦးသန့် အရေးအခင်း ဖြစ်တော့ ကျွန်တော်ကိုးတန်း။ အဲဒီ့မတိုင်ခင်က တက္ကသိုလ် ရွှေရတု အရေးအခင်း၊ သူ့ရှေ့က ကျွန်းဆွယ် အရေးအခင်းဆိုတာတွေကိုတော့ သိပ်ပြောပလောက်ဖွယ် မမှတ်မိ။ နောက် ဆယ်တန်း ဒုတိယနှစ် ပြန်နေနေချိန်မှာ အလုပ်သမား အရေးအခင်း။
မေမေက အစိုးရကို ထိုင်ဆဲတဲ့ သူ။ ဖေဖေက နိုင်ငံရေးကို သိပ် စိတ် မဝင်စား။ သူ့ဘဝ၊ သူ့အလုပ်၊ သူ့မိသားစုထဲမှာ နှစ်ထားခဲ့သူ။ ကျွန်တော်က အိယောင်ဝါး။
အဲလိုနဲ့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်ရောက်လာတော့ မှိုင်းရာပြည့်နဲ့ တန်းတိုးပြီး ကျောင်းတောင် ဖင်ပူအောင်မှ မတက်ရသေးခင် ကျောင်းတွေ ပိတ်သွား။ ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်ကြီးကြားမှာ ကျွန်တော့်အဖေ ပျောက်ကွယ်သွား။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကနေ အရှင်လတ်လတ် အငှားယာဉ် မောင်းသမား ဘဝကို ရောက်။
အဲ… ကျန်ပြန်ပြီ။ ၉ တန်း၊ ၁၀ တန်းတွေမှာ စာတွေ တအား ဖတ်နေပါပြီ။ အမှန်တော့ အမေက စာအုပ်သိပ်ဖတ်သူမို့ စာဖတ် ဝါသနာက ကိုယ်ထဲမှာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက၊ လောပိတမှာကတည်းက စွဲပြီးသား။ သို့သော် အရှိန် တအားတက်လာတာက ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်းမှာ။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို တစ်အုပ်ပြီး တစ်အုပ်ကို မနားတမ်း ဖတ်တော့တာ။
နောက်တော့ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်၊ ပထမနှစ်အောင်၊ ဒုတိယနှစ်အထိ ကျောင်းကို သွားလိုက်၊ ကားမောင်းလိုက်နဲ့၊ ဘဝက ဟုတ်တုတ်တုတ်။ တတိယနှစ်ကစပြီး ကျောင်းဆိုတာ ဘယ်လိုနေမှန်း မသိတော့ဘူး။ လမ်းပေါ်က အငှားယာဉ်မောင်းဘဝမှာပဲ အချိန်ပြည့်နီးပါး ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။
အခု ပြန်စဉ်းစားရင် တတိယနှစ်နဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်တွေမှာ ဘယ် ကျောင်းခန်းထဲ ကျောင်းတက်ရမှန်းတောင် ကောင်းကောင်း မသိချင်တော့ဘူး။ အဲသလောက် ကျောင်းနဲ့ အဆက်ပြတ်ခဲ့တာပါ။ သို့သော် နီးမှ ကပ်တွန်း၊ တစ်ပုဒ်ဖြေ၊ နှစ်ပုဒ်ဖြေပေမယ့်လည်း ဘွဲ့ရတွေ စက်နဲ့ ထုတ်သလို အရေအတွက် များများ ထုတ်ပေးနေတဲ့ စနစ်ကြီးအောက်မှာ တစ်နှစ်တစ်တန်း မှန်မှန်အောင်ပြီးသကာလ ကျွန်တော် ဘွဲ့ရလာခဲ့ပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံးနှစ် စာမေးပွဲ ဖြေခါနီးတန်းလန်းမှာ ကားမမောင်းဘဲ စာကျက်မယ် ရည်ရွယ်ပြီး ကားကို တခြား ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ကို ခဏပေးထားချိန်၊ မင်္ဂလာဒုံနားမှာ ကားမောင်းသင်နေဆဲ တပ်သားက မောင်းနေတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ရဲ့ အပေါ့စား ကုန်တင်ယာဉ်ငယ်က ကားကို စုတ်ပြတ်သတ်သွားအောင် တိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ အလျော်လည်း ကောင်းကောင်း ကန်းကန်းမရ။ ကားကို ပြန်ပြင်တော့ ကျွန်တော်တို့ သားအမိမှာ ကြွေးတင်။ နောက်ဆုံးမှာ ကားရောင်းပြီး ကားပြင်ရုံကို ကြွေးဆပ်ရတဲ့ဘဝနဲ့တင် ကျွန်တော့် အငှားယာဉ်မောင်းဘဝက ယာယီ နိဋ္ဌိတံသွားတယ်။
ကားမောင်းနေစဉ် လေးနှစ်မှာ အမြတ်ထွက်ခဲ့ပြန်တာက စာတွေ တအား ဖတ်ဖြစ်တာပါပဲ။ မြန်မာလိုတောင် မဟုတ်တော့ဘူး၊ အင်္ဂလိပ်လိုတွေပါ ဖတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျောင်းပြီးချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အင်္ဂလိပ်စာ အတော်တတ်တယ်လို့ ထင်ယောင်မှားလာပါတော့တယ်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်၊ ငါးတန်းနှစ်မှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရတဲ့ ပညာရေးစနစ် ထဲမှာ လူလားမြောက်လာတာမို့ ကျွန်တော်က စုံလုံးကန်းတွေအလယ်မှာ ရေးတေးတေးလေး မြင်နိုင်စွမ်း ရှိနေသေးတဲ့ တစ်ဖက်လပ်ပေပဲကိုး။
ကားရောင်းပြီးတဲ့နောက် ရွှေဝယ်ရောင်း လုပ်၊ ခွက်ခွက်လန်။ လန်မှာပေါ့၊ ကျွန်တော်မှ အလုပ်ထဲ စိတ်မဝင်စား၊ မလေ့လာ၊ မစူးစမ်းဘဲ သူများက ကိုက်တယ် ပြောတာနဲ့ ဝင်ဆော့တာမျိုး ဖြစ်နေတာကိုး။ အဲတုန်းက ရွှေ တစ်ကျပ်သားမှ လေးထောင်၊ အများဆုံး လေးထောင့် ငါးရာခေတ်။
အဲဒီ့ကနေ ကားဝယ်ရောင်း လုပ်ပြန်။ ခွက်ခွက်လန်ပြန်။ လန်မှာပေါ့။ ကျွန်တော်က သူဌေးလို လျှောက်လုပ်နေတာကိုး။ အမေ့ခမျာတော့ မချိမဆံ့ပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ ကြံရာမရဖြစ်ပြီး အငှားယာဉ်လေး ပြန်မောင်း။ မောင်းရင်းကနေ ကျူရှင်သင်ဖို့ စဉ်းစား။ ကျူရှင်ဆရာလေး ဖြစ်လာ။ အနည်းအပါး ဝင်ငွေမှန်လာ။
သူငယ်ချင်း အဆွယ်ကောင်းတာနဲ့ မှတ်ပုံတင်ရှေ့နေ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ဖြေ၊ ဆွယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းက မအောင်၊ ကျွန်တော်က အောင်လို့ နှစ်နှစ်တာ ဥပဒေပညာ သင်ယူ။ တစ်နှစ်တစ်တန်းအောင်၊ ရှေ့နေလုပ်မယ်ကြံ။ ဆိုရှယ်လစ် တရားစီရင်ရေးနဲ့ တွေ့တော့ ထိုအကြံသည်လည်း ခွက်ခွက်လန်။ (ဒါတွေ နောက်မှ အသေးစိတ်ရေးပြတော့မယ်ဗျာ။)
သို့သော် ရှေ့နေဘဝမှာ ကျွန်တော့်ဆရာရဲ့ အမှုသည် ကျေးဇူးကြောင့် သံတမန်လောကထဲက ကပြတဲ့ ပြဇာတ်ဝင်ကြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်စာ ပြောဆို လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလို့ မြင်လာ။ အဲဒီ့ ပြဇာတ်အသင်းကို ဝင်ရင်းက သံတမန်လောကနဲ့ ရင်းနှီးလာရက အသက် ၃၁ နှစ်မှာ အိမ်ထောင်ကျ၊ အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်လကျော်အကြာ၊ ဥရောပသမဂ္ဂမှာ ဘာသာပြန် အလုပ်ကို စရ။ တတိယမြောက် နှစ်မှာ ထောက်လှမ်းရေးက ခေါင်းကို အိပ်နက်ကြီး စွပ်ပြီး ခေါ်သွားတာ ခံရ။ ဘာအပြစ်မှလည်း မရှိပါဘူး။ ဘာနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှား မှုထဲမှလည်း မပါခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် ကျွန်တော့်ရုံးက ဗြိတိန်သံရုံး အဆောက်အအုံထဲမှာမို့ ကျွန်တော့်ကို အဲဒီ့သံရုံးဝန်ထမ်းမှတ်ပြီး သတင်းမယူအောင် ခေါ် ခြောက်တာပါ။ ကျွန်တော်ပြောပြတော့မှ ကျွန်တော်က ဗြိတိန်သံရုံး ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘဲ ဥရောပသမဂ္ဂ ဝန်ထမ်းမှန်း သူတို့ သိသွားတယ်။ သို့သော် အဲဒီ့ခေတ်က ဥပဒေဆိုတာ မရှိဘူး။ ထောက်လှမ်းရေးတွေ သိပ်တန်ခိုးထွားလို့ ကောင်းနေချိန်မို့ ကျွန်တော့်ကို တော်တော် စိတ်ပျက်အောင် အောင်မြင်စွာ လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုရမယ်။
သူတို့ ကျွန်တော့်ကို ၄၈ နာရီ စိတ်ဒုက္ခပေးပြီး ၁၁ လအကြာမှာတော့ ကျွန်တော်လည်း ဩစတြေးလျ သံရုံးကို ပြောင်းပြီး အလုပ်လျှောက်တာ အလုပ် ရလာတယ်။ အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော့် ဇာတာ စန်းလဂ်လေးအတော်ပြန် တက်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားတွေ ဘာတွေ နည်းနည်းပါးပါး ရောက်ဖူးသွားတယ်။ အဲဒီ့မှာ ၁၂ နှစ်ကျော်လုပ်ပြီးချိန်မှာတော့ စာရေးသူအနေနဲ့လည်း ကျွန်တော့် အခြေအနေက အတော်ခိုင်လာတယ်။
စာရေးသူအဖြစ် လက်သံအပြောင်ကောင်းလိုက်တာများ အလုပ်ကတောင် အထုတ်ခံရပြန်တယ်။ ကျွန်တော့် အထက် အရာရှိတွေက မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ အသင်းက မြန်မာသတင်းထောက်တွေကို လူလို မဆက်ဆံတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုက ၂၀ဝ၂ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကို ဂျာနယ်ထဲမှာ ကျွန်တော် ရေးလိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော့်လက်က ပြင်းသွားတော့ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်တဲ့သူက ဖြစ်၊ ကျွန်တော့်ရုံး ကို ချွန်တွန်းလုပ်၊ ကျွန်တော့်ရုံးက လူတွေ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်၊ နဂိုကတည်းက မြောက်ကြွ မြောက်ကြွနဲ့ ရုံးမှာ လူဝါးသိပ်ဝလွန်းသော ကျွန်တော့်ကို တွယ်ချင်နေတာက ကြာပြီ၊ အခုမှ အကွက်တွေ့တယ်ဆိုပြီး ကိုင်ထည့်လိုက်ကြတာ နေ့ချင်း ညချင်းပဲ အလုပ်ပြုတ်ပါရောလား။
ဒါပေမယ့် အတိုက်အခိုက် အထုအထောင်းများလေ၊ ငါးဖယ်လို မာလာလေများ ဖြစ်သလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘဝက အောက်ဆုံး အထိ နစ်မသွားဘူး။ သို့သော် လူတွေရဲ့ မနောကိုတော့ သိလာရပါတယ်။
သနားသလိုလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဝါးကူထိုးချင်တဲ့သူတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ လောကတံထွာမို့ ဘယ်သူ့မှ မဥပါဒ်မိပေမယ့် သင်ခန်းစာတွေကတော့ ရပြီးရင်း ရရင်းပေါ့။ အလားတူပဲ ကျွန်တော့်ကို တကယ့် စိတ်သဘောအမှန်နဲ့ ကူညီချင်သူတွေကိုလည်း သိလာရပါတယ်။
၂၀ဝ၃ ခုနှစ်ကနေ ကံတွေက လှိမ့်ဆိုးလာလိုက်တာများ ၂၀ဝ၆ လောက် အထိ ကော့နေအောင် ခံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မိသားစုလေး စည်းလုံးနေခဲ့တယ်။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ အပြစ်မတင်ကြဘူး။ ဖေးမတယ်။ စာအုပ်လုပ်ငန်းကို ဖိလုပ်တော့ လုံးချင်းနယ်ပယ်မှာလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ နေရာ ရလာတယ်။ စာရေးခြင်း အလုပ်နဲ့ပဲ အသက်မွေးတော့မယ်လို့တောင် စိတ်ကူးပေမယ့် ဘဝက ကြံစီတိုင်း မဖြစ်ပြန်ဘူး။
အဲသလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပြန်နာလံထူခဲ့ပါတယ်။
ပြောရင်တော့ အသေးစိတ်တွေက အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလို တစ်ပုံတစ်မပါ။
သေချာတာကတော့ အဖေတို့ အမေတို့ ကျေးဇူးကြောင့် ပညာကို တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း သိခဲ့တယ်။ စာတွေ နင်းကန် ဖတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ့ အသီးအပွင့်တွေကို ကျွန်တော် ကနေ့ ခံစားနေရပါတယ်။
ရုံးမှာ လုပ်ခဲ့တုန်းက တစ်လ ဝင်ငွေမျိုးကို အခုအခါမှာ ကျွန်တော် မှုစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အဲဒီ့ဝင်ငွေကို ကျွန်တော် မပြောနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ၂၄ နှစ် အရွယ် သမီးတောင် ပညာနဲ့ ရှာဖွေနိုင်နေပါပြီ။ အတော် ကြည်နူးစရာ ကောင်းလို့ နေပါတယ်။
မိသားစု ဘဝမှာလည်း အေးချမ်းစွာ နေနေရပါတယ်။ ကြောင့်ကြမဲ့လို့ တော့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ သို့သော် သိပ်ကြောင့်ကြစရာ မလိုဘဲ နေနိုင်နေပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာလည်း မရှိပါဘူး။ နိမ့်မြင့် ကျတက်ဆိုတဲ့ လောကဓံရဲ့ သဘောကို သည်အရွယ်မှာတော့ ကောင်းကောင်း နောကျေနေပြီမို့ တက်နေ မြင့်နေလည်း ဘဝင်မမြင့်အားတော့ပါဘူး။ နိမ့်တုန်း၊ ကျတုန်းကလည်း အီနေအောင် ခံခဲ့ဖူးပြီမို့ လာသမျှ လောကဓံ သတိလေးနဲ့ ခံဖို့ပဲ အားခဲနေရပါပြီ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အလိုအရ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသား တစ်ယောက်ရဲ့ ပျမ်းမျှ အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ အသက်ဟာ ၄၈ နှစ်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့အသက်ထက် ရှစ်နှစ်ကျော် ပိုနေပြီးပြီမို့ အခုနေ သေရမယ်ဆိုလည်း အေးအေး သေလိုက်ရုံ ရှိတာပါပဲ။ ကျွန်တော်နဲ့ ခေတ်ပြိုင်တွေ၊ ရွယ်တူတွေထဲမှာလည်း သေတဲ့သူတွေ သေကုန်ပြီပဲလေ။
ကျွန်တော်လည်း ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကတည်းက သေမလို ခံခဲ့ရဖူးပါပြီ။
မသေခင် စပ်ကြားမှာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာလေး လုပ်သွာရင် မိသားစု အကျိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးလေး နိုင်သလောက် လုပ်သွား။ သေစရာရှိတော့လည်း သေခြင်းကို ရွှင်ရွှင်ပျပျ လက်ခံနိုင်အောင်သာ အတတ်နိုင်ဆုံး အားထုတ်ရတော့မှာပါ။
ရေးဆိုလို့သာ ရေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စာက ဘယ်ကို ဦးတည်နေမှန်းလည်း ကိုယ့်ဘာသာ မသိဘူးခင်ဗျ။
၁၆ နှစ်ကနေ အခုအချိန်အထိ ဖြတ်သန်းခဲ့သမျှကို အတိုချုပ် စာရင်းချ ကြည့်လိုက်တာ ဖြစ်လင့်ကစား လိုရင်းကို ရောက်ပါ့မလားလို့ ပူမိရပါတယ်။
မရောက်လည်း မတတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော် ရေးတတ်သလို လျှောက်ရေးကြည့်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ သိပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ သူဖြစ်ချင်သလိုတွေ လျှောက်ဖြစ်နေတာချည်းပါ။ အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော်က အလိုက်သင့်မျှော နေရင်းက သည်ဘဝကို ရောက်လာတာပါပဲ။
အခုလည်း အတူတူပါ။ ကျွန်တော် ရေးချင်တဲ့စာကို ရေးချလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မဂ္ဂဇင်းက ပူဆာလို့ အားနာပြီး ရေးပေးလိုက်တဲ့စာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်တော့ သည်စာသည်လည်း အလိုက်သင့် ရေးလိုက်တဲ့စာလို့ သာ သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ သည်အထိတော့ ရောက်လာပြီမို့ သည်နေရာမှာပဲ နိဂုံးကမ္ပတ် အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
သည်ကြားထဲကမှ သည်စာလေးက တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် ရေးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် သာဓုခေါ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ ဘာမှလည်း မဟုတ်ဘဲ စာညံ့တစ်ပုဒ်ဖြစ်နေရင်တော့ ကျွန်တော် မရေးချင်တာကို ဇွတ်ရေးခိုင်းတဲ့ မဂ္ဂဇင်းကိုသာ ကလော်ကြပါတော့ခင်ဗျား။
(နေပြည်တော် – ၁၁၀၁၁၄)
၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လထုတ် Fashion Image မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Author lettwebawPosted on6March 20146March 2014 Categories Recounts, ReproductionLeaveacomment on ဖြူကောင်လည်ပြန်
Author lettwebawPosted on 20 October 2011 20 October 2011 Categories Information, Recounts, Reproduction5 Comments on Women’s Talk
Author lettwebawPosted on 12 June 2011 13 June 2011 Categories Recounts, Reproduction, Thoughts11 Comments on ချွတ်ခြုံ
Author lettwebawPosted on9June 2011 10 June 2011 Categories Recounts, Reproduction8 Comments on Believe it or not?
Author lettwebawPosted on 19 May 2011 19 May 2011 Categories Recounts, Reproduction, Travelogue4 Comments on OnaThai Train
Photos in My Heart
ဓာတ်ပုံတိုင်းက ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်စီကို ပြောနေကြတယ်တဲ့။
ဟုတ်မယ်။ တစ်လောဆီက အင်တာနက်ထဲမှာ ဗြိတိသျှ စာကြည့်တိုက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံသိုက်တစ်ခု သွားတွေ့တယ်။ အဲဒီ့မှာ ၁၈၈၅-၈၆ခုနှစ် လောက်က မန္တလေးတို့၊ ရန်ကုန်တို့ရဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ပုံနှိပ်ယူလို့ ရတဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ မန္တလေးကို သိမ်းဖို့အတွက် ဂေါဝန်ဆိပ်ကနေ ဗြိတိသျှ စစ်သားတွေ တက်လာတဲ့ ပုံတွေတောင် ပါသေးတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ဆိပ်ကမ်းအနီးတဝိုက်မှာ ရှိနေကြတဲ့ အရပ်သူ အရပ်သားတွေက ကြည့်ချင်ပွဲတစ်ပွဲကို ကြည့်နေကြသလို အုံပြီး ကြည့်နေကြတာကို တွေ့ရတယ်။
ကျွန်တော်က မန္တလေးသားဆိုတော့ မန္တလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံတွေကိုပဲ အဓိကထားပြီး ကြည့်မိသွားရတယ်။ ဟုတ်တယ်… ဓာတ်ပုံတိုင်းက ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်စီကို ပြောနေကြတာ အမှန်ပါပဲ။
သီပေါမင်း၊ စုဖုရားလတ်၊ စုဖုရားကြီးဆိုတာလည်း အဲတော့မှ မြင်ဖူးတယ်။ ကုလားဖြူတွေကို ခံတိုက်ဖို့အတွက် လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ သီပေါရဲ့ စစ်သင်္ဘောလည်း အဲတော့မှ မြင်ဖူးတယ်။ အဲဒီ့ဓာတ်ပုံတွေ မမြင်ဖူးခင်က မြန်မာတွေက လက်နက်အင်အား ချို့ငဲ့လို့ ခံလိုက်ရတယ် မှတ်တာ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ စစ်သင်္ဘောတွေလည်း ရှိသတဲ့။ အင်းဝခံတပ် မှာဆိုလည်း အမြောက်တွေနဲ့။
ဓာတ်ပုံတွေက ပြောပြနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေပေါ့။ စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းများလည်း ကိုယ့်ဘာသာ အဲဒီ့ဇာတ်လမ်းများကို မှန်းဆကြည့်ချင်ပါရင် British Library On Line Gallery မှာ ဝင်ကာ mandalay လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာလိုက်ရင် ပုံငါးရာကျော် တွေ့ရနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ကျွန်တော့် ပုဂ္ဂလိကဘဝမှာလည်း ဓာတ်ပုံတွေ အတော်များများ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
ကျွန်တော် မွေးကင်းစတုန်းက ပုံတွေ၊ ကလေးဘဝက ပုံတွေ၊ ရှင်ပြုတုန်းက ပုံတွေ၊ လူပျိုဖော် ဝင်ခါနီးပုံတွေ၊ လူပျိုပေါက်တုန်းက ပုံတွေသာမကဘဲ ကျွန်တော့်မေမေ အပျိုတုန်းက ပုံ၊ အမေ့ဘက်က အဘိုးနဲ့ အဘွားပုံ စသဖြင့် အထိုက်အလျောက် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
အလားတူပဲ၊ ဖေဖေ လူပျိုဘဝ ရေတပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က ပုံတွေအပါအဝင် အဖေ့ပုံအမျိုးမျိုးလည်း ရှိဖူးတယ်။ ဒါတင်မက ကျွန်တော် လူပျိုပေါက်အရွယ် စိတ်ကစားစဉ်အချိန်က အရူးအမူးဖြစ်ခဲ့ရသူများရဲ့ ပုံတချို့တောင် ကျွန်တော့်မှာ ရှိဖူးတယ်။
အဲဒီ့ပုံတွေသာ အခုနေ ရှိနေရင် ပုံတစ်ပုံစီက ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်စီကို ပြောပြနေမှာ သိပ်ကို သေချာလှပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ကျွန်တော့် ပုဂ္ဂလိက ဘဝထဲမှာ ငယ်ဘဝ ဓာတ်ပုံတွေက မရှိသလောက် ရှားသွားပြီ ဖြစ်သလို အမေနဲ့ အဖေတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံဆိုတာလည်း မနည်း လိုက်ရှာတော့မှ နှစ်ပုံစီလောက်သာ ရနိုင်ပါတယ်။
တော်တော် ကြေကွဲစရာ ကောင်းတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက သုံးယောက်ရှိတယ်။ အဖေရယ်၊ အမေရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်ပေါ့။ ဒါပဲ ရှိတာ။
အဲဒီ့မိသားစုမှာ ဓာတ်ပုံစာအုပ်က မှတ်မှတ်ရရ နှစ်အုပ် ရှိဖူးတယ်။ မေမေ အပျိုတုန်းက ဓာတ်ပုံစာအုပ်က တစ်အုပ်၊ အဖေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ထပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံစာအုပ်က တစ်အုပ်။ မေမေ့စာအုပ်ထဲမှာ မေမေ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မေမေ့ တပည့်တွေအပြင် မေမေ့အသည်းစွဲ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး၊ အဆိုတော်ကြီး (ဒေါ်)မေရှင့်ပုံတွေပါ ပါနေခဲ့တာကို မှတ်မိနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေ အားလုံး အခုအခါမှာ မရှိတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့်မေမေဟာ စိတ်ဒဏ်ရာ အရင့်အမာနဲ့ သူ့ဘဝရဲ့ ၇၅ နှစ် သက်တမ်းကို ဖြတ်သန်းသွားသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို မလိုချင်ဘဲ အမျိုးမျိုး ဖျက်ချဖို့ ကြိုးစားတဲ့ကြားက လူဖြစ်လာ၊ လူ့လောကထဲ ဝင်မယ့်ဆဲဆဲမှာလည်း သူ့ကို မလိုချင်၊ မလိုချင်တော့ မအေ့အသက်နဲ့ ကလေးအသက် ဘယ်သင်းကို ယူမလဲလို့ ဖအေလုပ်သူကို မေးတဲ့အခါ မအေ့အသက်ပဲ ယူမယ်လို့ ပြောလိုက်။ ဆရာဝန်ကလည်း ဒါနဲ့ ကလေးကို ညှပ်နဲ့ဆွဲပြီး မွေး။ အသေလေး မွေးတယ်အမှတ်နဲ့ နီးရာ စားပွဲပေါ် သည်တိုင်း ပစ်တင်ထားပြီး သေလုမျောပါး ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ မီးဖွားပြီးစ မိခင်ကိုပဲ ဂရုစိုက်နေ။ အဲဒီ့အခိုက်မှာမှ အသေလေး မွေးထားတယ်လို့ ထင်တဲ့ (ကျွန်တော့်မိခင်လောင်းလျာ) မွေးကင်းစလေးက လှုပ်လိုက်ပြီး စားပွဲ ပေါ်က ပြုတ်ကျ။ မွေးပြီးလို့ မိနစ်ပိုင်းတင် ခေါင်းပေါက်သွားခဲ့ရ။
ဟား… ဆိုးလိုက်တဲ့ အဖြစ်ဗျာ။ သည်အဖြစ်ဆိုးကို ထိန်ချန် မထားကြဘဲ ကျွန်တော့်အမေ သိအောင် ပြောပြခဲ့ကြလို့ ကျွန်တော့်အမေက ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောပြလို့ ကျွန်တော်တောင် သိခွင့်ရတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲသလို ပြောပြသူတွေကလည်း ကျွန်တော့်အမေရဲ့ မိရင်း ဘရင်းများ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေကြတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ သည်လောက်တောင် အသိဉာဏ်ဆင်းရဲရကောင်းလားလို့ ကိုယ့်အဘိုး၊ ကိုယ့်အဘွားကို အပြစ်တင်ချင်သလို ဖြစ်မိခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် အစမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဲဒီ့အချိန်က မန္တလေးသူ မန္တလေးသားများရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက ပြောနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြန်ကြည့်မိတော့ အပြစ်မတင်ရက်တော့ဘူး။ သူ့ခေတ်နဲ့တော့ သူတွင်ကျယ်ပေါ့။
အဓိက ပြောလိုရင်းက မေမေက အဲဒီ့ စိတ်ဒဏ်ရာကြီး ရှိနေခဲ့တာ။ ဒါ့အပြင် မေမေ့ကို မွေးပြီးတော့လည်း ဂြိုဟ်ကောင်မလေး၊ စနေဂြိုဟ်လေးဆိုတဲ့ အစွဲတွေနဲ့ ငယ်ဘဝမှာ ကောင်းကောင်း နှိပ်စက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ သမီးလေး တစ်ယောက်တည်းရယ်လို့လည်း တန်ဖိုး မထားကြဘူး။ သမီး၊ မိန်းမဆိုတာကို တန်ဖိုးမထားဘဲ ခွဲခြားဆက်ဆံကြတဲ့ ခေတ်ကာလလည်း ဖြစ်တာကိုး။
အဲတော့ မေမေဟာ စိတ်ဒဏ်ရာ အရင့်အမာနဲ့ လူဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဖေနဲ့ ရတော့လည်း အဖေက မဟာဖိုဝါဒနဲ့။ အမေ့ စိတ်ဒဏ်ရာကို သေသည်အထိ နားလည်မသွားဘဲ သူ စိတ်တိုင်းမကျတိုင်း အမေ့ကို ဖိရိုက်တဲ့ နည်းနဲ့သာ သူ့အိမ်ထောင်ရေးဘဝကို ကျော်လွှားသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲတော့ မေမေ့စိတ်ဒဏ်ရာက သက်သာမလာဘဲ တစ်သက်လုံး တစ်တိ တစ်တိနဲ့ အုံကျင်းဖွဲ့လာရပါတော့တယ်။
မေမေ့မှာ နိုင်လို့ရတာ ဘာမှ မရှိရှာဘူး။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကျွန်တော့်ကို နိုင်လို့ ရချင်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် မိခင်စိတ်နဲ့ ညှာခဲ့မှာပါ။ အဲတော့ သူ နိုင်လို့ ရတာက ဓာတ်ပုံတွေပါ။
အဖေ့ကို မကျေနပ်တိုင်း အဲဒီ့ဓာတ်ပုံတွေကို အမေက ရမယ်ရှာခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ အဖေနဲ့ သူနဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲက တချို့တွေကို အဖေ့ဘက် တစ်ခြမ်း ကပ်ကြေးနဲ့ ကိုက်ကာ လှီးဖြတ်ပစ်ပြီး မီးရှို့ပစ်တတ်တာ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကတည်းက မကြာခဏ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲတုန်းက ကျွန်တော်က ကလေးလည်း ကလေး၊ ကျွန်တော့်ကိုပါ ကျွဲရိုက်၊ နွားရိုက်ရိုက်တတ်ရုံတင်မက ကျွန်တော် သိပ်ချစ်တဲ့ ကျွန်တော့် အမေကိုပါ ကျွန်တော့် မျက်စိအောက်တင် လူမဆန်စွာ ရိုက်နှက် နှိပ်စက်တာတွေကို တစ်လမှာ ရက် ၂၀ လောက် မြင်ထားရတဲ့ အရှိန်ကလည်း ရှိနေတော့ အမေ လုပ်နေတာတွေကို တားရကောင်းမှန်း မသိတဲ့အပြင် စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြီးတောင် အားရနေမိခဲ့သလား မသိဘူး။
အမေနဲ့ အဖေနဲ့က စုစုပေါင်း ၂၃ နှစ်နီးပါး ပေါင်းလိုက်ရတယ်။
ဖေဖေ မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ဖေဖေ့ဓာတ်ပုံတွေကလည်း မကျန်သလောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။
ကျွန်တော်ကလည်း အခု အသက် ၅၃ နှစ်ရောက်တော့မှသာ မေမေ့ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ ဘာညာနဲ့ လျှောက်ရေးမိတော့တာ၊ အဖေကွယ်ချိန် အသက် ၁၉ နှစ်သားတုန်းကတော့ ဒါတွေ ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲဗျာ။ ကျွန်တော့်အမေနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က တော်တော် အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ မေမေကလည်း ကျွန်တော့်ကို စိတ်တိုင်းမကျပါဘူး။
ဆိုးသွားတာက မေမေက ကျွန်တော့်ကို မွေးထားတာဆိုတော့ သူ နိုင်လို့ ရမယ်လို့ ထင်ထားတယ်။ ခက်တာက ကျွန်တော်ကလည်း လူလေးလည်း တစ်နေ့တခြား ဖြစ်လာ၊ အမေကိုလည်း ခါးချိအောင် ကားမောင်းပြီး ရှာကျွေးနေရတော့ လူဝါးက ဝ၀လာတယ်။ အမေ ပြောရင် မခံတော့ဘူး။ အမေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ ဖြစ်လာတယ်။
အဲဒီ့မှာတင် ကျွန်တော့် ဓာတ်ပုံတွေလည်း စတင် ထိုးနှက်ခံရတော့တာပါပဲ။
ဇာတ်ရှိန်တက်သွားတာက မေမေ သဘောမတူတဲ့ မိန်းမကို ယူလိုက် တာပါ။ မေမေ သဘောမတူတဲ့ မိန်းမဆိုလို့ တစ်မျိုးတော့ မထင်လိုက်ကြ ပါနဲ့။ စာရိတ္တတွေ၊ ဉာဏ်ရည်တွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ မေမေ့ ပေတံနဲ့ မကိုက် ညီတာ သက်သက်ပါ။
အဲဒီ့နောက် ချွေးမနဲ့ ယောက္ခမ ဘောက်ကျကြ၊ ကျွန်တော်က တစ်အိုးတစ်အိမ်လည်း ခွဲလိုက်ရော၊ ဟား… မေမေ့ရဲ့ ဒေါသတွေဟာ ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံတွေ အပေါ်မှာ ကျရောက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်သက် နှစ် ၁၇ နှစ်ကျော် အကြာမှာ မေမေ ဆုံးပါတယ်။ (ကံအားလျော်စွာ ကျွန်တော့် လက်ပေါ်မှာပဲ ဆုံးသွားတာပါ။)
အဲဒီ့ ၁၇ နှစ်သက်တမ်းအတွင်းမှာ မေမေဟာ သူနိုင်မယ့်နည်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကို အရေးယူတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးသာမက ဓာတ်ပုံစာအုပ်များကိုပါ စုပ်စမြုပ်စ မကျန်အောင် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာပါပဲ။
ဓာတ်ပုံတိုင်းဟာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်စီကို ပြောနေကြတယ်တဲ့။
ဟုတ်ကဲ့… ကျွန်တော့်မှာ ဇာတ်လမ်း မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် မွေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း မရှိဘူး။ ငယ်ဘဝ ဇာတ်လမ်း မရှိဘူး။ လောပိတမှာ နေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း မရှိဘူး။ မန္တလေးမှာ နေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလည်း မရှိဘူး။ လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်နဲ့ လူပျိုပေါက်အရွယ်၊ ရွှေစက်တော်ကို၊ ကျိုက်ထီးရိုးကို၊ ပုဂံကို သွားခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ အမေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလည်း မရှိတော့ဘူး။ အမေချစ်တဲ့ ခင်တဲ့ သူတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း မရှိတော့ဘူး။
အားလုံး စုပ်စ မြုပ်စပျောက်။
တော်သေးတယ်၊ အဖေနဲ့ အမေနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရယ်၊ အမေကိုယ်တိုင် တမင် သေချာကူးပြီး ချန်ထားခဲ့တဲ့ အမေ ငယ်ငယ်က ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရယ်၊ ချောင်ကြိုချောင်ကြားက ထွက်လာတဲ့ အဖေ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရယ် ရှိနေလို့သာ ကျွန်တော့် သားနဲ့ သမီးမှာ သူတို့အဖေဟာ မိစုံဖစုံနဲ့ မွေးလာခဲ့တာမှန်း မှန်းဆနိုင်ကြလိမ့်မယ်။ တကယ့်တကယ် ကျွန်တော့်မှာ တခြား ပြစရာ မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော် အငယ်ဆုံး ဓာတ်ပုံက အသက် ၂၀ အရွယ်လောက်က ပုံတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့ရှေ့ပိုင်း နှစ် ၂၀ လုံးလုံးက မရှိတော့ဘူး။
ပြောရင်းနဲ့ ကြေကွဲလာပါတယ်။ ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့အခါတိုင်းလည်း တကယ် ကြေကွဲရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူ့စိတ်ဆိုတာ ကြေကွဲစရာကို ကြိတ်ဖြေတတ်တဲ့အမျိုး ဆိုတော့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဖြေယူရတာပေါ့ဗျာ။
ဘာမှ မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လည်း ရှင်းသွားတာပေါ့။ အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားလိုက်ကြစို့ရဲ့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ အတိတ်က ဓာတ်ပုံထဲမှာ ရှိနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ထဲမှာ ရှိနေတာ။
အခုပဲ ကြည့်လေ… ကျွန်တော့်အတိတ် တစ်စွန်းတစ်စကို စာဖတ်သူလူကြီးမင်းတွေတောင် ဖျိုးခနဲ ဖျတ်ခနဲ မြင်လိုက်ကြရပြီ မဟုတ်ပါလား။
ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပါ ပြနိုင်ရင်တော့ ပိုလို့ ဝေဝေဆာဆာ ဖြစ်မှာပါ။ သို့ပေမယ့် ဓာတ်ပုံမပါသည့်တိုင် ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ထဲက ဝေဒနာတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တော့ အခုလည်း စာဖတ်သူလူကြီးမင်းရဲ့ ရင်ထဲကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ ရောက်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝကိုယ် အချဉ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေ ရှိတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မရှိတော့လည်း ဘာဖြစ်သေးတုံးဗျာလို့။
(ရန်ကုန် – ဝ၁၀၈၁၀)
(မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်ပုံအသင်း နှစ် ၆၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာပါ။)
Author lettwebawPosted on 11 May 2011 11 May 2011 Categories Recounts, Reproduction, Thoughts7 Comments on Photos in My Heart
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် အင်္ဂါနေ့ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
နေ့ခင်းက လျှပ်စစ်မီးဖိုတစ်လုံး ၀ယ်ဖို့ ဇနီးသည်က ပြောတာနဲ့ အိမ်နဲ့ နီးတဲ့ ရန်ကင်း ဆယ်(န်)ထာက ဆစ်ထီးမာ့(ထ်)ကို ရောက်သွားတယ်။ မီးဖိုကို ရွေးချယ် စမ်းသပ်ပြီး ၀ယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ ငွေရှင်းမယ်လုပ်တော့ ငွေလက်ခံတဲ့ စားပွဲငယ်လေးမှာ ကျွန်တော့်ရှေ့က တစ်ဦးက အသက် ၅၀ ကျော် သီလရင်တစ်ပါး ဖြစ်နေပါတယ်။ သီလရင်က ငွေရှင်းဖို့ စောင့်နေရင်းက သူ့နောက်က ကျွန်တော့်ကို မြင်သွားတော့ “စာရေးဆရာ အတ္တကျော် မဟုတ်လား”တဲ့။ ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့် မထားတဲ့ နေရာမှာ ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့်မထားသူ တစ်ဦးဆီက သည်လို မေးခွန်းမျိုးကို ကြားလိုက်ရတော့ အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရသလို ကြည်နူးသွားတာကိုလဲ ၀န်ခံပါတယ်။
ခက်တာက သီလရင်ကို ဘယ်လို နာမ်စားနဲ့ စကားပြောရမှန်း မန္တလေးသား ကျွန်တော် မသိတော့တာပါပဲ။ တင်ပါ့လို့ပဲ ပြောရတာပ။ သို့သော် ဘုရားဆိုတာလည်း ထည့်လို့ မဖြစ်မှန်း သိနေတော့ အတော် ခက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း တပည့်တော်လို့ ပြောရမလား၊ မပြောရဘူးလား မသိဘူး။ ဆရာလေးက ကျွန်တော့်စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရုံမက ခင်မင်သူတွေကို လက်ဆောင် ၀ယ်ပေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ဆက်မိန့်ပါသေးတယ်။ စာအုပ်နာမည်တွေလည်း ရွတ်ပြသွားလေရဲ့။
ကြည်နူးစွာ အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အိ မ်ပြန်ရောက်တော့ စာတစ်ထပ်က ကျွန်တော့်ကို ဆီးကြိုနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ စာတိုက်သေတ္တာ သတ်သတ် လုပ်ထားတာ ရှိတယ်။ ပရိသတ်က ဆက်သွယ်ချင်ရင် လွယ်ကူ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ထားတာပါ။ စာတိုက်သေတ္တာကို ကျွန်တော့် စာအုပ်တိုက် ၀န်ထမ်းက ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးဘက် ရောက်တာနဲ့ လမ်းကြုံလို့ ၀င်ဖွင့်လာခဲ့ပုံ ရပါတယ်။
အဲဒီ့ထဲက စာတစ်စောင်ကလည်း ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကြည်နူးစရာ ကောင်းနေပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို “မင်း”ဆိုတဲ့ နာမ်စားနဲ့ တရင်းတနှီး ရေးထားတဲ့ မန္တလေးက “အဘွား”တစ်ယောက်ရဲ့ စာတစ်စောင်ပါပဲ။ သူ့စာ အသွားအလာ၊ သတ်ပုံနဲ့၊ လက်ရေး ခပ်သော့သော့တို့ကြောင့် အဲဒီ့အဘွားဟာ ကျွန်တော့် အမေ အရွယ်၊ အသက် ၈၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် စာဖတ်နာသူ အမေကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်မယ်လို့ မှန်းဆမိရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ကြည်နူးစရာ ကောင်းနေတဲ့ အဲဒီ့ အဘွားရဲ့ စာလေးကိုလည်း မူရင်း သူ့သတ်ပုံများအတိုင်း အစအဆုံး ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ့စာကို ခေါင်းစဉ်တပ်ရရင်တော့ “ကျွန်တော်မျိုးကြီး သေသင့်ပါတယ်”လို့ ဖြစ်သွားမလားပဲခင်ဗျ။
နေ့စွဲ ၁၁၊ ၁၊ ၂၀၁၁
ဒီနေ့မှာ အဖွားစိတ်တွေ တစ်ခါမှ မဖြစ်စဖူး အထူးပဲ လေးနေခဲ့တယ်။ လောကကြီးထဲမှာ နေရတာကို ဘာမှ အဓိပ္ပာယ်မရှိသလိုလဲ ခံစားနေခဲ့မိတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်နေတုံးမှာဘဲ အဖွားရဲ့ သ္မီး အငယ်ဆုံးလေးရောက်လာပြီး မင်းရဲ့ “မဖတ်ကြည့်နဲ့နော်”ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေး လာပေးတယ်။ (အမေ… သူများဆီက ငှားလာတာတဲ့။ ဘတ်ပြီးရင်လဲ သူ့စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း စာပြန်ရေးလိုက်ပါအုံး)လို့ ပြောသွားတယ်။
ဒါနဲ့ သ္မီးငယ်လေး ပြန်သွားပြီးမှ စိတ်မပါ့တပါနဲ့ဘဲ မင်း စာအုပ်ကို စဘတ်မိတယ်။ ဘတ်ရင်း၊ ဘတ်ရင်းနဲ့ ပြုံးလာမိတယ်။ နောက် အသံမထွက်ပဲ ရီခဲ့တယ်။ နောက် သစ်ကုလားအုပ်တွေ ကာရာအိုကေဆိုတာ မြင်လိုက်ရတော့ အသံထွက်ပြီး တစ်ယောက်တည်း ရယ်မိတယ်။ စောစောက စိတ်ညစ်၊ ၀မ်းနည်းနေခဲ့တာတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး။ ကိုယ်ဘတ်ပြီးတော့ ချက်ချင်းပဲ လက်ဆင့်ကမ်းခြင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ခက်တာက အနားရှိတဲ့လူတွေက သိပ်မအားကျဘူး။ စာဖတ်ချိန်လည်း သိတ် မပေးနိုင်ကြဘူး။ ၀ါသနာလဲ သိတ်မပါကြဘဲ အားရင် မြန်မာ ဟာသခွေတွေလောက်ပဲ ငှားပြီး တစ်အိမ်လုံး ကြည့်လေ့ရှိနေတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတယ်။
အဲ… ၁၀ တန်း ကျောင်းသားလေး ကျူရှင်က ပြန်လာတာ တွေ့တော့ ခဏလေး… ငါးမိနစ်လောက်ကလေး အချိန်ပေးပြီး ဒါလေး ဖတ်ကြည့်စမ်းပါလို့ ပြောတော့ အင်တင်တင်ရယ်။ အော်… ဖတ်စရာ မလိုဘူး အရုပ် ကြည့်ယုံလေးရယ်လို့ ပြောပြီး လက်ထဲ အတင်း ထဲ့ပေးလိုက်ရတယ်။ နောက်တော့ သူတို့ တအိမ်လုံး ဖတ်ဖြစ်သွားကြတယ်။ အားလုံး ပြုံးလို့ဘဲ။ ရီရတယ်နော်တဲ့။ မင်းစာအုပ်ကလေးကြောင့် အားလုံး ပြုံးပျော်သွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဖွား အကြံပေးခြင်တာကတော့ နောက်ထပ် ရိုက်အုံးမယ်ဆိုရင် မူရင်း အင်္ဂလိပ်စာတန်းလေးပါ တွဲပြီး ထည့်ပေးစေခြင်ပါတယ်။
မင်းဘာသာပြန်ထားတာကို မယုံလို့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဘတ်တဲ့လူတွေ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးအောင်ရယ်၊ တခါတလေ အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေး တစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ မြန်မာလို ပြန်ရရင် သိတ်ပြီး မထိရောက်ပဲ ရှေလျားထွေပြားသွားတတ်လို့ မူရင်းလေးနဲ့ ထိထိမိမိ ဘတ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒပါဘဲ။
နောက်တခုက မင်း ကလောင်နံမည်ဘဲ။ ဒီစာအုပ်လေးကို မင်းက လူအများ ဘတ်ပြီး ပြုံးရွှင်ကြပါစေ။ ပျော်နိုင်ကြပါစေလို့ စေတနာအပြည့်အ၀နဲ့ လုပ်ထားခဲ့ပြီး မင်းနာမည်ကျမှ “အတ္တ”တဲ့လား။ အတ္တဆိုတာ အဖွားနားလည်သလောက်ကတော့ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားပဲလေ။ ဒီတော့ မင်းနံမည်လေးက စေတနာ လျော့ပါးမှာ မဟုတ်၊ မေတ္တာကို အရင်းခံပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ စေတနာမို့ “မေတ္တာကျော်”လို့ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
နံမည်ပြောင်း ကင်ပွန်းတတ်ရင် အဖွားကိုလဲ ဖိတ်ပါအုံး။
ကျမ္မာစွာ၊ စိတ်ရော လူရော ချမ်းသာစွာနှင့် စာပေများ ဆက်လက်ပြီး ရေးကာ ထုတ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါသည်။
P.S. မင်းစာအုပ်တွေကို ဒီတအုပ်ပဲ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကြိုက်သွားပြီ။
နံမည်ဟာလဲ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်။ မြေးတွေ မင်းစာအုပ်တွေ ဖတ်နေတာ တွေ့ပေမယ့် “အတ္တ”ဆိုတဲ့ နံမည်ကို ကြည့်ပြီး ခေတ်လူငယ်လေး ရူးကြောင် မူးကြောင် ရေးချင်ရာတွေ ရေးထားတာပဲ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ကိုင်ကို မကြည့်ခဲ့ဘူး။
ဒီလိုဘဲ မင်းခိုက်စိုးစံ ဆိုလဲ နံမည်ကိုက ဘ၀င်ကိုင်နေတဲ့ နံမည်လို့…
အဖွားတို့က ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်း ပေါ်တဲက စာတွေ ဘတ်လာပြီး စာပေ အနုအယဉ်ဆို မောင်သာရ၊ နိုင်ငံရေးဆို ရန်ကုန်ဘဆွေ။ ဂျာနယ်ကျော် မမလေးတို့၊ ခင်နှင်းယုတို့ကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ လမင်းမိုမိုတို့၊ နွန်ဂျသိုင်းတို့ တခါလောက် ဘတ်ကြည့်ပြီး လှဲ့ကို မကြည့်တေ့ဘူး။ နောက်တော့ ဘာသာပြန်တွေဘဲ ကြိုက်သွားတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာစာရေးဆရာတွေကို သိတ်စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ ဂျူးလဲ ထွက်ခါစ ခဏကတော့ ဘတ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းကို မရေးတော့ဘဲ သူသိထားတာတွေ သူတတ်တာတွေဘဲ ရေးလာတော့တယ်။
မောင်သာရ အသက်ကြီးလာတော့ လက်ပြောင်းသွားသလိုပါဘဲ။ ဒီလိုပါဘဲ ကိုယီးယားကားတွေ ကြည့်ပြီး မြန်မာအငြိမ့်တို့ ဇာတ်လမ်းတို့က ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မရှိတော့သလို ဖြစ်ကုန်သွားတယ်။ စာပေအနုပညာမှာလဲ ရေးစက ၀ါသနာပါပြီး လူအများ လက်ခံအောင် အပြုသဘော စာပေတွေ ရေးကြပေမယ့် နံမည်လေး ရလာရင် စီးပွားရေးဆန်ပြီး ၀တ္ထု တအုပ်ပြီး တအုပ်ထွက်ဘို့ သက်သက်ဘဲ ရည်ရွယ်လာကြတာ စာပေ အရသာက ပျောက်ပျောက်ကုန်တယ်။
ပရိသတ်ကို အလေးထားတတ်စေချင်တယ်။ “မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း” ၀တ္ထုစာအုပ်ကြီးကို အစချီ တည်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် အဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ စာရေးဆရာကြီးလဲ ရှိသေးတယ်။ အဆုံးသတ်ရ ခက်နေပုံ ရတယ်။ ဇာတ်အိမ်ကြီး ဘွဲ့ထားပြီး ဇာတ်သိမ်းခက်နေပုံ ပေါက်တယ်။ တိုင်းပြည်က သူထင်သလို၊ သူ စ ရေးတုံးကလို မဖြစ်လာဘဲ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်နေတော့ သနားပါတယ်။
တချို့ဝတ္ထုထဲ ဇာတ်လိုက်နာမည်ပေးထားတာက မင်းသိင်္ခထက်တောင် ကဲနေသေးတယ်။ မြေးတွေက ပြောပါတယ်။ အဖွားက ခေတ်မမှီတော့လို့တဲ့။ ဒါ့ကြောင့် နံမည်ဟာလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကား၊ စာအုပ် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်တိုင်းမှာ “ပညာပေး”တခုခုတော့ ပါမှ စာပေ၊ ရုပ်ရှင်လို့ အဘွားက ယူဆထားတော့ ခေတ်နဲ့ မကိုက်ညီတော့ဘူးပေါ့ကွယ်။
ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိတဲ့ scanner က အခု Windows7နဲ့ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ driver ကို အင်တာနက်ကနေ download လုပ်ကြည့်ပေမယ့်လည်း ဘာလွဲနေမှန်း မသိတော့ scanner သုံးလို့လို့ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အခု စာရေးလိုက်တဲ့ ဒေါ်တင်တင်ရီရဲ့ စာနဲ့ စာအိတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကင်မရာနဲ့သာ ဖြစ်သလို ရိုက်ပြီး အဖြစ်ပဲ တင်ပေးလိုက်ရတာကို နားလည် သည်းခံတော်မူပေးကြပါခင်ဗျား။
သြော်… သူပြောတဲ့ ကျွန်တော့်စာအုပ်နာမည်က “မဖတ်ကြည့်နဲ့နော်” မဟုတ်ပါဘူး။ “မဖတ်နဲ့နော်”သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ၊ နွမ်ဂျာသိုင်းကိုလည်း သူ စာလုံးပေါင်းထားတဲ့အတိုင်း “နွမ်ဂျသိုင်း”လို့သာ သူ့စာကို ပြန်ကူးရာမှာ ရေးထည့်လိုက်တာပါ။ မင်းခိုက်စိုးစန်ဆိုလဲ သူက စံထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ ခင်ဗျား။ နောက်ဆက်တွဲ အပါအ၀င် စာတစ်စောင်လုံး သူ့စာလုံးပေါင်းများအတိုင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းပါ။
Author lettwebawPosted on 16 February 2011 16 February 2011 Categories Recounts8 Comments on အမှတ်တရ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅
Win Oo, the Ideal Artist
ကွယ် တာ ကြာ ပေ မယ့် ဘယ် ခါ မေ့ နိုင် လိမ့်
“၀င်းဦး” ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲ ၀င်လာတာ လူမှန်း သိကတည်းက ဖြစ်သည်။ သူ့သီချင်းသံတွေက အရင်ဝင်လာတာ ဖြစ်လိမ့်မည် ထင်သည်။ အိုး… မေဘရဏီလို… ငွေပန်းချီတောင် လက်မှိုင်ချရသကိုး… မမမိုး… ၀ိုးဝို့ဝို ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သူ့ခေတ်မှာ လူဖြစ်လာတာဟု ဆိုရမလား မသိပေ။ ကလေးဆိုတော့ ၀င်းဦးကား ကြည့်ဖူးသလား၊ မကြည့်ဖူးသလားလည်း မမှတ်မိ။ သီချင်းကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ၀ါသနာပါပြီး တကြော်ကြော် ဆိုနေတတ်ပေရာ မမမိုး ၀ိုးဝို့ဝိုကတော့ တော်တော် စွဲခဲ့တာ မှတ်မိနေပါသည်။
နောက်ထပ် မှတ်မိတာ တစ်ခုရှိသေးသည်။ အဲဒါက မေမေ လစဉ် ၀ယ်ဖတ်သော ရှုမ၀ မဂ္ဂဇင်းထဲက ၀င်းဦး၏ ၀ထ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ၆ နှစ်လား၊ ၇ နှစ်လားတော့ မသိ။ သို့သော် ၆ နှစ်၊ ၇ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်အဖို့ ၀ထ္ထုကို နားမလည်နိုင် မခံစားတတ်နိုင်သေးချေ။ အဲတော့လည်း ၀င်းဦးသည် ကျွန်တော့်အတွက် ၀ိုးဝို့ဝိုသာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၀ိုးဝို့ဝိုသာ မကပါ။ “မီးပုံပွဲမှာ စုကာ ဝေးကာ အပေါင်းအဖော်များနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်”တွေရော၊ “မေခင် ကျွန်တော့်အချစ်တော် ဟိုင်း… ဟိုင်…”တွေ အပါအ၀င် သူ့သီချင်းပေါင်းများစွာကို နှုတ်တက်ရွရွ ဆိုတတ်ခဲ့ပါသည်။
မှတ်မှတ်ရရကတော့ ၁၀ နှစ်သားမှာ ဖြစ်သည်။ အဲတော့ ကျွန်တော် မန္တလေးသို့ ရောက်နေလေပြီ။ ၀င်းဦး၏ တိမ်လွှာမို့မို့လွင် ပိုစတာကြီးများက တစ်မြို့လုံးကို မင်းမူထားသည်။ ကျွန်တော်က ကျောင်းကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် ဘင်ခရာ အသင်းကို ၀င်သည်။ အဲတုန်းက ကြက်ခြေနီမှာရော ဘင်ခရာမှာပါ ၀တ်စုံအဖြူ အထက်အောက် ဆင်တူ ၀တ်ရသည်။ ဒါကို သဘောကျသဖြင့် အသင်းများသို့ ၀င်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၀မ်းတွင်းရူးဟု ထိုခေတ်က လူတကာ သရော်လေ့ရှိသော ၀င်းဦးရူး ရောဂါပိုး စ၀င်ခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။
၁၁ နှစ်သားမှာ ရန်ကုန်ရောက်လာပြီ။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်။ ၀င်းဦး အရှိန်တက်လို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပင် ဖြစ်တော့သည်။ သူ့ပုံတွေ ပါသော စာစောင် မဂ္ဂဇင်းတွေ ကြည့်ရတာ အမော၊ သူ့ကားဆိုလည်း ကြည့်ချင်မိရတာ အမော။ သူ့သီချင်းဆိုလည်း လိုက်ဆိုရတာ အမောပင်။
ကျွန်တော် ၁၃ နှစ်သားမှာ သူ အကယ်ဒမီ ရသည်။ မှုန်ရွှေရည်။ မှုန်ရွှေရည်ထဲက သီချင်းတွေ တစ်ပုဒ်မကျန် ကျွန်တော် အကုန်ရသည်။ ကျွန်တော့် ပင်ကိုသံကလည်း သူ့လိုပင် အသံလုံးကြီးသော ဘယ်သံဖြစ်ပေရာ သူ့အသံနှင့် တစ်ထပ်တည်း တူအောင် တုပြီး ဆိုရတာကိုပင် အရသာရှိနေသည်။ အဖေက ကျွန်တော် ၀မ်းတွင်းရူးနေတာကို သိသည်။ သည်တော့ ၀င်းဦး၏ အားကျစရာ တခြား အရည်အချင်းတွေကို ပြောပြသည်။ သူ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်တာ၊ သူ ပညာတတ်ပြီးမှ အဆိုတော် မင်းသား လုပ်တာများကိုပင် ဖြစ်သည်။
မှတ်မိနေတာ တစ်ခု ရှိသေးသည်။ accident ကို ၀င်းဦး အသံထွက်တာ။ ၀င်းဦးရူးသော ကျွန်တော်သည် ၀င်းဦး သီချင်းမှန်သမျှ မလွတ်တမ်း နားထောင်တတ်သလို သူ့သီချင်းအတော်များများကိုလည်း (ယနေ့ထက်တိုင်) အလွတ်ရသည်။ သူ့ အသံနှင့် လာသော ရေဒီယို အသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းများကိုဆိုလည်း တခုတ်တရ နားဆင်သည်။ ထိုအထဲမှာမှ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း အစီအစဉ်မှာလည်း သူက အသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းမှာ အသံဖြင့် သရုပ်ဆောင်ဖူးသည်။ ယင်းအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းတွင် ၀င်းဦးက “အက်(ခ်)ဆစ်ဒင့်(ထ်)”ဟု ပီပီသသ ထွက်သွားတာကို မှတ်မိနေခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်လျှောက်လုံး အက်ဆီးဒယ့်(န်)ဟု ထွက်လာခဲ့သော ကျွန်တော့်အသံထွက်အတွက် သူက အမှန်ကို ပြပေးသော ကြားဆရာ ဖြစ်လေသည်။
ကိုးတန်း ဆယ်တန်းမှာတော့ စာတွေ ကောင်းကောင်း ဖတ်တတ်လေပြီ။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော်နေထိုင်ရာနှင့် မဝေးလှသော နေရာမှ စာအုပ်ဆိုင်လေးမှာ စာအုပ်စုံလှသည်။ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာတိုင်း၏ စာအုပ်များ တစ်အုပ်မကျန် ရှိနေတတ်သည်။ သည်တော့ ၀င်းဦးကို ကျွန်တော် ဖတ်ပြီ။ သူ့စာအုပ်တွေ တစ်အုပ်မကျန် ဖတ်သည်။ အဲတော့လည်း သူ့အရေးအသား၊ ဇာတ်ဖွဲ့ပုံများကို သဘောကျလို့ မဆုံးနိုင်ပြန်တော့ပေ။
ထိုစဉ်က ၀င်းဦးမှာ တိုက်ခန်းတွေ ရှိသည်။ လွစ္စလမ်းဟု ထိုစဉ်က ခေါ်သော ယခု ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမှာ တစ်ခန်း၊ ဘားလမ်းဟု ခေါ်သော မဟာဗန္ဒုလ ပန်းခြံလမ်းမှာ တစ်ခန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ နေသည်မို့ ထိုလမ်းများမှ ဖြတ်တိုင်း ၀င်းဦးကို တွေ့ရနိုးနှင့် ကြည့်ရတာလည်း အမောသား။ သူ့ အမိုးဖွင့် ပြိုင်ကား နီနီလေးမြင်လျှင်လည်း အူယားဖားယား ကြည့်မိသည်။ ကားနံပါတ်တောင် မှတ်မိနေပါသေးသည်။ စ-၅၆၇၁ ခင်ဗျ။ နှုတ်ခမ်းမွေးနှင့် အသားဖြူဖြူ မင်းသားကြီးကိုကား ရိပ်ခနဲသာ မြင်လိုက်ရသည်ချည်းပင်။
ထိုခေတ်က ကားဟောင်းတွေကို ရုံပြန်ပြန်တင်သည့် အလေ့ ရှိသည်။ ၀င်းဦးကားသာဆိုလျှင် ဘယ်လောက် ဟောင်းဟောင်း၊ ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် အမိအရ ပြန်ကြည့်နေမိခဲ့စမြဲပင်။
၀င်းဦး စာအုပ်အဟောင်းတွေဆိုလည်း စာအုပ်ဈေးပွဲတော်တိုင်းမှာ လိုက်ရှာသည်။ တွေ့သမျှ ၀ယ်ထားသည်။ ရှာရှာဖွေဖွေ ပြား-၆၀ တန် ၀င်းဦး အချစ်ဝတ္ထုတစ်အုပ်ပင် ကျွန်တော့်မှာ ရှိနေသည်။ အင်တာနက်ခေတ်မှာလည်း ၀င်းဦး သီချင်းတွေ လိုက်စုနေတာ အပုဒ် ၇၀ နီးပါး ရခဲ့လေပြီ။
အားလုံးချုပ်လိုက်လျှင် ကျွန်တော့် တစ်ဘ၀လုံးကို ၀င်းဦးက အကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုးထားခဲ့ပါသည်။ ယုတ်စွအဆုံး အမိုးဖွင့် ပြိုင်ကား စီးချင်သော ရောဂါအထိ ကျွန်တော့်မှာ အကြီးအကျယ် ရှိပါသည်။ အင်္ကျီအဖြူ၊ ဘောင်းဘီအဖြူ၊ ဖိနပ်အဖြူ ၀တ်ချင်သော ရောဂါကလည်း မသေးချေ။ လစ်ရင် လစ်သလို ၀တ်နေမိဆဲဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မေလမှာ ကျင်းပသော ရွှေအမြုတေ စာပေဆုပေးပွဲမှာ အခမ်းအနားမှူး လုပ်စဉ်ကတောင် ၀တ်လိုက်သေးသည်။ ကျွန်တော့် ပြောပုံဆိုလက်၊ ကျွန်တော့် ရေးပုံသားပုံ၊ ကျွန်တော့်အ၀တ်အစားတွေမှာ တော်တော် သိသာနေပါသည်။ အထင်ရှားဆုံးကား ကျွန်တော့် တစ်ပုဒ်တည်းသော လုံးချင်း ၀တ္ထုမှာ ၀င်းဦး၏ “မိန်းမလှ အမုန်း”နှင့် မထင်မှတ်ဘဲ သွားဆင်နေခြင်းပင်တည်း။ (သူ့လောက် ကောင်းဖို့နေနေသာသာ သူ့ခြေဖျားပင် မမီဟု ကျွန်တော့်ဝတ္ထုကို ဆရာမောင်ဝဏ္ဏက ထောမနာပြုဖူးပါသည်။)
သို့သော် ထိုဝင်းဦးကို သူ အသက်ရှင်စဉ်အခါက တစ်ခါမျှ လူချင်း မတွေ့ခဲ့ဖူးပါ။ သူ့ စန္ဒာမဂ္ဂဇင်းသို့မူ စာမူလေးတွေ ပို့ခဲ့ဖူးပါသည်။ တစ်ခါမျှ အရွေးမခံခဲ့ရချေ။
စာတည်းစားပွဲ အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းလျက် စာပေလမ်းပေါ်သို့ ကျွန်တော် ရောက်ရှိစအချိန်မှာတော့ ၀င်းဦးတစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာ ယူကြုံးမရ။ နေမယ်ဆို ကောင်းကောင်း နေနိုင်သေးသော အရွယ်ဖြစ်သည်။ လုပ်စရာတွေလည်း အများကြီး လုပ်နိုင်သေးသည်။ ထိုအရွယ်မှာ သူ ကွယ်တော့ ကျွန်တော့်မှာ မဆည်နိုင်၊ မဖြေနိုင်။
ထို့ကြောင့် သူ့ကို လွမ်းလွမ်းနှင့် ၀င်းဦးသုတေသန လုပ်ပြီး မဟေသီမှာ ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ၀င်းဦး၏ မိသားစုဝင် တချို့၊ ၀င်းဦး၏ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တချို့ကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းကာ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ခက်တာက အမှန်ကို ပြောရန် လူအတော်များများက ၀န်လေးနေကြခြင်းပင်။ ခပ်ဖွဖွသာ ပြောခဲ့ကြသဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကောက်ကြောင်းကိုသာ ရသည်။
သူ့အမေဘက်က အဘိုးက အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်က ဆရာဝန်ကြီး ကာနယ်(လ်) ဘခက်၊ သူ့အမေက မင်နီဘခက်၊ စန္ဒယားအတီးကောင်းကာ စီးကရက်ကြိုက်သူ၊ သူ့အမေနှင့် သူ့အဖေတို့ ကွဲတော့ သူတို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတစ်တွေက မအေနဲ့ ကျန်ခဲ့ကြတာ၊ ၀ါးချက်ကို စစ်ပြေးတော့ သူ့အမေ မမာတော့တာ၊ သည်အချိန်မှာ သူ့အဖေနဲ့ သူ့မိထွေးတို့ကလည်း ၀ါးချက်ကိုပဲ ပြေးလာကြရာက ပြန်ဆုံကြတာ၊ သူ့အမေကွယ်တော့ ဖအေနဲ့ ပြန်ပေါင်းစည်းရတာ၊ ချောင်တစ်ချောင်မှာ ကုပ်ပြီး စာအုပ်နဲ့ မျက်နှာ မခွာတမ်းဖတ်တာ၊ ၁၅ နှစ်နဲ့ ဆယ်တန်းအောင်တာ၊ တက္ကသိုလ်တက်ချိန်အထိ လူဗလံလေး၊ ပိန်ညှော်ညှော်နဲ့၊ တက္ကသိုလ်က အလှပဂေးကို ချစ်ရေးဆိုရာမှာ ဟိုက နင့်လို ကနွဲ့ကလျနဲ့ ဗလံလေးကဆိုပြီး ပြောထည့်လိုက်တာမို့ စိတ်နာပြီး စစ်ထဲ ၀င်သွား၊ အလေးမ၊ အားကစားလုပ်ရင်း သူ့ကိုယ်ခန္ဒာကို မွေးမြူခဲ့တာ၊ အဲဒီ့ဘ၀က ဇာတ်လမ်းစုံ၊ သူကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်၊ သြစတြေးလျမှာ ပညာသင်သွားခဲ့တာ၊ ပြန်လာတော့ မွေးပွ ခွေးလေးတစ်ကောင်ပါလာတာ၊ ၀င်ဒါမီယာ အသံလွှင့်ရုံမှာ သူ သဘောကျတဲ့ အဆိုတော် သီဆိုနေတော့ သွားပြီး ခွေးလက်ဆောင် ပေးခဲ့တာ၊ ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းတိုက်သို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပေါက်ချလာတတ်သော နှုတ်ခမ်းမွှေးနှင့် စာရေးဆရာ ကိုလူချော၊ သူရုပ်ရှင်ထဲ ရောက်လာပုံ၊ လျှမ်းလျှမ်းတောက်လာချိန်မှာ တစ်သက်လုံး အနေအထိုင် စည်းမရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်က သူ့ကို ဇာတ်သွင်းခဲ့တာ၊ သူအတိုက်အခိုက်ခံရပုံ မျိုးစုံ၊ သူ ဘာသာပြောင်းခြင်း အကြောင်းရင်း၊ မှုန်ရွှေရည်ထဲက စရိုက်နဲ့ သူ၊ သူက တစ်ဖက်သားတွေကို သူ့နည်းနဲ့သူ ပြန်နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာ၊ သူ့ကို စာမျက်နှာပေါ်ကနေ တိုက်ခိုက်သူတွေ သူတိုက်တဲ့ အရက်ကောင်းကို သောက်ကာ သူသေတော့ သူ့ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေ ရေးကုန်ခဲ့ကြတာ…. အို… ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကောက်ကြောင်းပေမင့် အများကြီးကို သိခွင့်ရခဲ့ပါသည်။
ထိုအထဲမှာမှ သူ့ အနုပညာ လုပ်ကွက်လှလှလေးတွေ၊ အနုပညာအား ကောင်းပုံတွေ၊ သင်ယူမှတ်သားမှု မြန်ဆန်ပုံတွေကိုလည်း သိခွင့်ရလိုက်တာ တစ်ပုံတစ်မ။
အားလုံးချုပ်လိုက်လျှင်မူ သူမတူအောင် ထူးခြားသော ပါရမီရှင်တစ်ဦးဟုသာ ဆိုရန် ရှိတော့သည်။ သို့သော် မှတ်တမ်းမှတ်ရာကား များများစားစား မကျန်နိုင်တော့ချေ။ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းသည်မှာ သူ့ရုပ်ရှင်ကား အများအပြားအနက်မှ တချို့တလေသာ ကျန်ရစ်တော့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ မှုန်ရွှေရည်၊ မောင်တို့ ချယ်ရီမြေ၊ ဆောင်းတစ်ည၀ယ်၊ ကျောက်မဲ အကျဉ်းသား၊ သစ္စာတူပြိုင်၊ တိမ်လွှာမို့မို့လွင်၊ ချစ်သူရွေးမယ် ချစ်ဝဲလည်၊ မုန်းပါတယ် မောင့်ကို၊ တစ်ကျော့နှစ်ကျော့ တေးကိုသီတို့လောက်သာ ရှိတော့မည် ထင်သည်။ နှစ်ယောက်ထဲ နေချင်တယ်၊ ချစ်သော မောင်မောင်၊ မောင်မောင်နဲ့ သိင်္ဂီ၊ မုန်းတစ်လှည့် ပြုံးတစ်လှည့်၊ သိကြားစေ သက်သေညွန်း၊ ပိတောက်ရိပ်ဝယ်၊ နှင်းပျောက်တဲ့ နွေ၊ ဆောင်းအိပ်မက်တို့ဆိုရင် ဘယ်တွေ ရောက်သွားရှာလေပြီလဲ မသိ။
ထို့ထက် ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းသည်ကား စာရေး အင်မတန် ကောင်းသော အတုယူထိုက်သော သူ့စာများကို နှောင်းလူတို့ ဖတ်ခွင့်ကြုံရန် ခက်ခဲနေခြင်းပင်ဖြစ်တော့သည်။ ၀င်းဦးကို အတော်များများက ဇာတ်လိုက်မင်းသား၊ အဆိုတော်အဖြစ်သာ သိထားကြပါသည်။ စာရေးဆရာ ၀င်းဦးအဖြစ် လူငယ်တွေဆိုလျှင် မသိကြတော့ပါ။ အမှန်က ၀င်းဦး၏ အနုပညာ ခရီးအစသည် စာရေးဆရာ ဘ၀သာဖြစ်ပါသည်။ မင်းသား ၀င်းဦးဖြစ်ပြီးမှ စာအုပ်ထုတ်စားသည်မျိုး မဟုတ်မူဘဲ စာရေးဆရာအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ အောင်မြင်ပြီးမှ ရုပ်ရှင်နယ်ထဲသို့ ရောက်လာကာ ရုပ်ရှင်မှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်သွားသူသာ ဖြစ်လေသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀၊ ၀င်းဦးကွယ်လွန်ပြီးစတွင် ဆရာဝင်းဖေ (စာပေနယ်တွင် ဇင်နိုးကြူး ၀ါဒဟု တွင်ကျယ်စေခဲ့ရာတွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆရာမြဇင်။ ကျန်သူများမှာ ကျွန်တော့် အင်္ဂလိပ်စာဆရာ မောင်သာနိုးနှင့် ဆရာမင်းလှညွန့်ကြူးတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကား စကားချပ်)နှင့် ဧည့်ခံပွဲတစ်ပွဲတွင် ဆုံခဲ့ဖူးသည်။ ဆရာ ၀င်းဖေနှင့် ၀င်းဦး၏ စာပေလက်ရာများအကြောင်း ပြောဖြစ်ရာ ဗန်းမော်တင်အောင်၏ သြဇာက တင့်တယ်အပေါ်မှာ သက်၊ တင့်တယ်၏ သြဇာက ၀င်းဦးအပေါ်မှာ သက်ခဲ့သည် မှန်သော်လည်း ၀င်းဦး၏ စကားပြေရေးဟန်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရှိသဖြင့် stylist ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်း ဆရာဝင်းဖေက အလွတ်သဘော ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။
၀င်းဦး၏ စာပေလက်ရာများမှာ နှောင်းလူတို့အတွက် အမှန် တကယ် အတုယူဖွယ်၊ နည်းနာယူဖွယ် စကားပြေလက်ရာများသာ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဖတ်ထားသလို နိုင်ငံတကာ စာပေကိုလည်း အထိုက်အလျောက် အဖတ်အရှုများသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ သူ့စာလေးတွေမှာ တွေးစရာ တစ်ပုံတစ်ပင် ပါဝင်နေခဲ့ဖူးသည်မှာလည်း ဧကန်ပင်။
သူ့စာတွေကို အများပြည်သူ နှောင်းလူ ခေတ်လူငယ်များ ဖတ်ဖြစ်စေချင်သော စေတနာနှင့် ထုတ်ဝေခွင့်ရရန် ကျွန်တော် ကြိုးပမ်းဖူးပါသည်။ သို့သော် သူ့စာများအပါအ၀င် သူ့အနုပညာအရပ်ရပ်ကို ဆက်ခံသူကမူ ဒါတွေနှင့် ဝေးလွန်းလှသည်။ သူ့ကို အဆိုတော် မင်းသား တစ်ဦးအဖြစ် အရူးအမူး ချစ်ခဲ့သည်က လွဲ၍ သူ့တန်ဖိုးကိုလည်း သတိမမူ၊ သူ့အနုပညာအမွေများကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ စိတ်ကူးမရ ဖြစ်နေပေရာ သူ့စာတွေကို လူအများ ဖတ်ရဖို့ ခဲယဉ်းနေပါလေတော့သည်။
သို့သော်… ယနေ့ကာလ နည်းပညာခေတ်၊ သတင်းအချက်အလက်ခေတ်ကြီးမှာ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်က သန်းလာပါလေပြီ။ သူ့စာတွေကို အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အပင်ပန်းခံ တင်ဖို့သာ လိုသည်။ ပင့်ကူအိမ်မှတ်တမ်းဟု ခေါ်သော နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းစာမျက်နှာတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ရန်မှာ ဘာမှ ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်လှချေ။ ထိုစာမျက်နှာပေါ် အပင်ပန်းခံပြီး တင်မည့်သူ တစ်ယောက်မျှ ပေါ်လာလျှင်ပင် ၀င်းဦး၏ လက်ရာမွန်များကို လူငယ် ပရိသတ် ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်တော့မည်မှာ မလွဲပါတည်း။
ထိုနည်းဖြင့်ပင် တစ်နှစ်မျှအတွင်း ၀င်းဦး၏ သီချင်းပေါင်း ၇၀ ကျော်ကို ကျွန်တော် စုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေရာ မဝေးသောကာလမှာလည်း ကျွန်တော် ချစ်သော၊ လေးစားသော၊ အားကျသော စာရေးဆရာ ၀င်းဦး၏ စာများကို ဖတ်ရှုနိုင်တော့မည်ဟု မမှိတ်မသုံ ယုံကြည်နေမိရပါတော့သတည်း။
(၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်မှာ ကွယ်လွန်တိမ်းပါးခဲ့သော အနုပညာရှင် ၀င်းဦး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၂ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ)
(ရန်ကုန် – ၁၀၁၂၁၀)
Author lettwebawPosted on 22 December 2010 22 December 2010 Categories Recounts, Win Oo10 Comments on Win Oo, the Ideal Artist
Author lettwebawPosted on 1 November 2010 1 November 2010 Categories Recounts, Reproduction2 Comments on In Ever Loving Memory of Min Min Latt
Just Can't BeaBumpkin, My Darling! (Chapters 8 and 9)